ပြောင်းဖူးစလုကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန်. ......၅ ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း)
ကြက်သွန်နီ......................၁ လုံး ( ပါးပါးလှီး)
သကြား...........................၁ ဇွန်း ( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း )
ပြောင်းဖူးကို ဓါးထက်ထက်လေးနဲ. ၂ ခါခြစ်လှီးရုံနဲ.ကုန်သွားသည်အထိခြစ်
ပြီးလှီးပါ ။ ( ခြစ်ဇကာများနဲ.ဆိုအခွံ ၊အနှစ်ကွဲသွားတတ်ပါတယ် )
ကြက်ဥကို သမအောင်ခေါက်ပြီး..ဆား၊ သကြားအရသာသွင်းပါ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန်.လေးလည်းအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ။
ရွှေလိပ်ပြာမှုန်.ကို ထည့်ပေါင်းပြီး...ရေ( ၃) ဇွန်းလောက်ထည့်ကာထပ်ပြီး
ခြစ်လှီးထားတဲ့..ပြောင်းဖူး ၊ ကြက်သွန်နီတွေ ထည့်ပြီးရောမွှေကြည့်ပါ။ မပျစ်မ
ကျဲအနေအထားမှာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ လိုအပ်ပါမှ..ရေအနည်းငယ်ထပ်ဖြည့်
(ရေ ထည့်ရတဲ့အချိုးအစားမပြောတာက အချို.မကျွမ်းကျင်သူများဆို ပြောင်း
ဖူးခြစ် ၊ ကြက်သွန်လှီးကတည်းကရေထွက်နေတတ်ပါတယ် )
ဟင်းကော်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာလောက်ကို ထည့်ပြီးဆီပူပူမှာ ရွှေအိုရောင်ရအောင်